အစင်းဒီဇိုင်းတွေနဲ့ အိမ်အတွင်းပိုင်းကို ဘယ်လိုအလှဆင်မလဲ? - Lifestyle Myanmar
အစင်းဒီဇိုင်းတွေနဲ့ အိမ်အတွင်းပိုင်းကို ဘယ်လိုအလှဆင်မလဲ?
အစင်းတွေက အတွင်းပိုင်းအလှဆင်မှုတွေအတွက် classic အဆန်ဆုံး ဒီဇိုင်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အစဉ်အလာအားဖြင့် အစင်းဒီဇိုင်းက ဘယ်နေရာမှာမဆို ကြည့်ကောင်းတာကြောင့် အများစုက အခန်းတိုင်းမှာ သုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါတွေကို ဘာလို့ အဲ့လောက်သုံးကြတာလဲ? အစင်းတွေက အခန်းကို ပိုကျယ်သွားစေနိုင်တဲ့ အမြင်အာရုံကို ဖန်တီးပေးလိုပါပဲ။
အစင်းဒီဇိုင်းတွေက အမြင်အာရုံမှာ နေရာပိုကျယ်စေတာကြောင့် သင့်အိမ် တန်ဆာဆင်ခြင်းအတွက် အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့က စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို နည်းအောင်လုပ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းကို ကြည်လင်စေပြီး ငြိမ်းချမ်းငြိမ်သက်သော နေရာတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းအတွက် အစင်းတွေအသုံးပြုခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်လို့ သိဖို့လိုအပ်တာလေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ဒေါင်လိုက်အစင်းတွေက အတွင်းပိုင်းအပြင်အဆင်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ များစွာ အကျိုးရှိပါတယ်။ သူတို့က အခန်းကို အမြင်အာရုံမှာ ပိုမိုနက်ရှိုင်းမှုပေးပြီး ပိုကျယ်တယ်လို့ ထင်ရစေပါတယ်။ optical illusion တစ်ခု ဖန်တီးပေးပြီး မျက်နှာကျက်တွေကို ပိုမြင့်လာပုံပေါက်စေပါတယ်။
သူတို့က အခန်းတွေကို ရှည်လျားစေတဲ့ effect ကိုလည်းပေးပါတယ်။ သင့်မှာ အခန်းငယ်လေး (ဒါမှမဟုတ်) မျက်နှာကျက်နိမ့်တွေရှိရင် ဒေါင်လိုက်အစင်းတွေကို သုံးခြင်းဖြင့် အခန်းတွေကို ပိုကျယ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
ဒီအားသာချက်တွေအပြင် ဒေါင်လိုက်အစင်းတွေက အခန်းတွေကို ပိုပြီး organized ဖြစ်ပုံလည်း ပေါ်စေပါတယ်။ အချို့သောလေ့လာမှုတွေအရ လူသားတွေဟာ အစင်းတွေကိုကြည့်တဲ့အခါ ငြိမ်းချမ်းမှုကို ခံစားရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဂျီသြမေတြီပုံစံဒီဇိုင်းတွေက စိတ်ကိုစုစည်းပေးပြီး သဟဇာတဖြစ်မှုကို ဖန်တီးတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့အတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
ဒေါင်လိုက်အစင်းတွေနဲ့မတူဘဲ အလျားလိုက်အစင်းတွေက အခန်းရဲ့ အမြင့်ကို တိုစေပါတယ်။ သူတို့က အမြင်အာရုံမှာ မျက်နှာကျက်တွေကို နိမ့်စေပြီး အခန်းကို ပိုသေးသွားစေပါတယ်။ သူတို့ကို အခန်းငယ်တွေနဲ့ အထပ်နိမ့်အခန်းတွေမှာ မသုံးသင့်ပါဘူး။
သို့သော် သူတို့ကို သုံးလိုရင် small areas တွေကို ကိုယ့်ဘာသာ ကန့်သတ်ဖို့ (ဒါမှမဟုတ်) သူတို့ကို အသေးစိတ်အနေနဲ့သာ သုံးဖို့ ကြိုးစားပါ။ နံရံရဲ့ အလယ်လောက်မှာ အစင်းခပ်ပါးပါးလေး ထည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ကို ငြိမ်တဲ့အရောင်လေးတွေနဲ့ စမ်းကြည့်ပါ။
အလျားလိုက်အစင်း အထူကြီးတွေကို ပိုပြီး classic ဆန်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေအတွက် ကျွမ်းကျင်လိမ္မာစွာ ထည့်နိုင်ပါတယ်။ နံရံတွေကို ပရိဘောဂတွေနဲ့ နီးကပ်စွာ မြင်နိုင်ခြင်းအားဖြင့် အကျယ်အဝန်း ခံစားမှုကို လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
အစင်းတွေကို ဘယ်နေရာမှာ သုံးမလဲ?
နံရံတွေမှာ အစင်းတွေ အသုံးပြုခြင်း
နံရံတွေပေါ်မှာ အစင်းတွေ အသုံးပြုခြင်းက အခန်းတွေကို ပိုကြီးမားလာစေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ မျက်လုံးကို လှည့်စားဖို့နဲ့ နေရာနှင့် အမြင့်ကို ရယူဖို့ အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း လှည့်ကွက်ကောင်းတွေထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူတို့ကို အလင်းကာလာအဖြစ်သုံးရင် visual space ရဲ့ စင်တီမီတာအနည်းငယ် ပိုရနိုင်ပါတယ်။ သင့်အခန်းကို ပိုတောက်ပလာစေပြီး ထပ်တိုးရှု့ထောင့်ကြောင့် ပိုကြီးမားလာသလို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ သူတို့က သမုဒ္ဒရာရဲ့ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းနဲ့ တူပြီး သင့်အား အေးချမ်းမှုပေးတာကြောင့် သဲနှင့် အပြာရောင်ကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ မီးခိုးရောင်နှင့် အဝါနုရောင်တွေကလည်း ကောင်းစွာ အလုပ်ဖြစ်ပြီး ဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်မဆို အေးချမ်းမှုကို ဖြည့်ပေးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အစင်းအထူကြီးတွေကို သတိထားသင့်ပါတယ်။ အရမ်းထူတဲ့ အစင်းတွေ သုံးပါက သင့်အခန်းဟာ ဆန့်ကျင်ဘက် သက်ရောက်မှုတွေနဲ့ ပြည့်သွားပြီး ပိုသေးငယ်သွားပါလိမ့်မယ်။ အခန်းနံရံမှာ အလျားလိုက်အစင်းတွေ သုံးမယ်ဆိုရင် အခန်းကို မလွှမ်းမိုးစေဖို့ သတိထားရပါမယ်။ တောက်ပတဲ့အရောင်တွေကို ရှောင်ပါ၊ နံရံပေါ်မှာ ဓါတ်ပုံဘောင်တွေ၊ decal တွေ(သို့) အခြားအလှဆင်ပစ္စည်းတွေ မသုံးပါနဲ့။ မျက်စိအရမ်းရှုပ်စေပါတယ်။
ဂွမ်းကပ်အစင်းတွေက သင့်အိပ်ခန်းထဲကို special detail ထည့်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အစင်းကြောင်းတွေက အခန်းတစ်ခန်းအတွက် ဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတာ သင်အခုသိပါပြီ။ သင့်အိပ်ခန်းထဲကိုထည့်ပြီး ဘယ်လောက်ပိုကျယ်ပြန့်လာလဲဆိုတာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့က သင့်အခန်းကို ပိုကြည့်ကောင်းအောင်လည်း ကူညီပါလိမ့်မယ်။ အဝါနုရောင်နှင့် အဖြူရောင် ပေါင်းစပ်လျှင် (ဒါမှမဟုတ်) အပြာရောင်တွေကို ရွေးချယ်လျှင် ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ သက်တောင့်သက်သာ လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းနိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
အစင်းပါတဲ့ ဆိုဖာတွေကို လူကြိုက်များပါတယ်၊ ဆိုဖာတွေပေါ်မှာ အစင်းတွေသုံးခြင်းက စတိုင်လ်ကို ဖန်တီးပေးပြီး plain pattern ထက် အမြင်မှာပိုနက်ရှိုင်းစေပါတယ်။ အရောင်အတွက်ဆိုရင်တော့ ရွေးချယ်စရာအများကြီး တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သင်က အန္တရာယ်များတာမကြိုက်ဘူး၊ Classic ပိုဆန်တာကို လိုချင်ရင် အရောင်ငြိမ်ငြိမ်လေးတွေ ရွေးချယ်ပါ။ နည်းနည်း ထင်းနေချင်ရင် ကာလာအမျိုးမျိုး ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဆိုဖာကို ရှာပါ။ အရောင်တောက်တောက်ဆိုဖာတွေက ကလေးတွေအခန်းတွေမှာ အရမ်းကြည့်ကောင်းပါလိမ့်မယ်။
အစင်းပါတဲ့ ဆိုဖာတွေက တစ်အိမ်လုံးအလှဆင်ထားတာမျိုးနဲ့ လုံးဝလိုက်ဖက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့ကို boho, country (or) shabby chic styles တွေနဲ့လည်း ကောင်းကောင်းတွဲဖက်လို့ရပါတယ်။
တင်းကျပ်ပြီး ပေါင်အထိမြင့်သော ဘွတ်ဖိနပ်အရှည်များဖြင့် လှပနေခဲ့သော Sunmi
Sumi ဟာ တကယ့်ကို ဖက်ရှင်ကျကျဝတ်ဆင်တတ်တဲ့ idol တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရှည်လျားပြီး တင်းကျပ်နေသော ရှူးဒေါက်ဖိနပ်တွေကို ဝတ်ဆင်လေ့ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ရှည်လျားသောခြေထောက်တွေနဲ့အတူ မယုံနိုင်စရာ ကခုန်မှုစွမ်းရည်တွေကြောင့် တစ်ခြားလူတွေနဲ့မတူဘဲ ဒီလိုဖိနပ်တွေစီးတတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ Sunmi ရဲ့ ပန်းရောင်ဘွတ်ဖိနပ်ဟာ...
ကြည့်ကောင်းပေမယ့် ကျွန်မတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကို တဖြည်းဖြည်းပျက်စီးစေတဲ့အရာ (၈)ခု
အလှတရားက နာကျင်မှုလို့ တစ်ချို့လူတွေက ပြောကြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ လူတွေကို ပုံမှန် အသက်ရှုလို့မရစေတဲ့ ကော်လာအမာတွေ၊ ဝတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ အမျိုးသမီးတွေကို မကြာခဏ အသက်ရှုရခက်ပြီး မူးမေ့သွားစေတဲ့ ဗစ်တိုးရီးယား ကော့ဆက်အကျပ်တွေ အတိတ်ဖက်ရှင်မှာ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ အချိန်အကြာကြီး ဝတ်ဖို့...
စတိုးဆိုင်မှာ အဝတ်အစားဝယ်တဲ့အခါ မှန်ကန်တဲ့ဆိုဒ်ကို ရွေးချယ်တတ်စေဖို့ နည်းလမ်း (၇)ခု
စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ အဝတ်အစားဝယ်တဲ့အခါ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်မယ့် အဝတ်အစားကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူတတ်စေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ၁။ ဘရာတစ်ထည် ဘရာစီယာရွေးချယ်တဲ့အခါ အရွယ်အစားက အရေးအပါဆုံးအရာ ဖြစ်ပေမယ့် ဘယ်လိုတွက်ချက်ရမလဲဆိုတာ လူတိုင်းမသိပါဘူး။ စတိုးဆိုင်ကို မသွားခင် မိခင်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ သင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ မတ်တပ်ရပ်ပါ၊...